Ny herin'ny angon-drakitry ny harena ankibon'ny tany sy ny rafitra fanapahana fanapahan-kevitra | Martech Zone
Ity infographic avy amin'ny New Jersey Institute of Technology ity dia mampiseho ny Data Mining sy ny rafitra fanohanana ny fanapaha-kevitra, mamaritra ny fizarana efatra samihafa ao anatin'ny rafitra ankapobeny.
Data Management - manangona ny fampahalalana azon'ny orinasa iray avy amin'ny varotra, ny firaketana ary ny tatitry ny mpanjifa.
Fitantanana modely - fanandramana hamorona fehin-kevitra avy amin'ny paikadin'ny orinasa efa misy hahitana raha mahomby na tsia.
Masinina fahalalana - mijery mamorona paradigma vaovao hifaneraserana amin'ny fironana.
User Interface - mamela ny fifandraisana amin'ny data.
Ny voalohany, fitantanana angon-drakitra, manangona ny fampahalalana azon'ny orinasa iray avy amin'ny varotra, ny firaketana ary ny tatitry ny mpanjifa. Ny fitantanana modely dia manandrana mamorona fehin-kevitra avy amin'ny paikadin'ny orinasa efa misy mba hahitana raha mahomby izy ireo na tsia. Ny motera fahalalana dia toa mamorona paradigma vaovao hifaneraserana amin'ny fironana. Farany, ny interface an'ny mpampiasa dia mamela ny fifandraisana amin'ny angon-drakitra. Ny faritra tsirairay amin'ny rafitra dia afaka mitondra ampahany hafa.
Tags: angona fitantananaangona fitrandrahanamotera fahalalanatsena fikarohanafitantanana modelyMpampiasa interface
13 Jan 2014 amin'ny 8:15 PM
Infographic manampy be amin'ny fampiasana ny fitrandrahana angon-drakitra. Misaotra nizara vaovao mifandraika toy izany.